काँग्रेसमा पुस्तान्तरणका लागि यो उपयुक्त समय हो : अजयबाबु सिवाकोटी - sailungonline
काँग्रेसमा पुस्तान्तरणका लागि यो उपयुक्त समय हो : अजयबाबु सिवाकोटी
२५ मंसिर २०७८, शनिबार १०:२२ । काठमाडौं
नेपाली काँग्रेसको १४ औँ महाधिवेशन २४-२७ मङ्सिरमा काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा हुँदैछ । नयाँ नेतृत्व चयन हुने महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा पदाधिकारीदेखि केन्द्रीय सदस्यमा धमाधम उम्मेदवारी घोषणा भइरहेको छ ।
यहीँ दौडमा होमिएका छन् अजयबाबु शिवाकोटी । दुई दशकदेखि पत्रकारितामा सक्रिय शिवाकोटीले राजनीतिमा हाम फालेका छन् । नेपाल प्रेस युनियनका महासचिव एवं हाम्रा कुरा अनलाइन पत्रिकाका संस्थापक सम्पादक शिवाकोटी दोलखाबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन भएका छन् । पत्रकारिता बिट मारेको घोषणा गर्दै उनले काँग्रेसको केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । पत्रकारिताबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेका सिवाकोटीसँग महाधिवेशन केन्द्रित कुराकानी गरेको छ:
तपाईँले लामो समय पत्रकारितामा बिताउनुभयो, अहिले राजनीतिमा किन आउनुभयो ?
साढे दुई दशको पत्रकारितामा जुन किसिमको ज्ञान सीप आर्जन भयो, त्यसलाई राजनीतिमार्फत अझ फराकिलो दायरामा काम गर्न सकिन्छ कि भन्ने लागेर राजनीतिमा प्रवेश गर्ने जमर्को गरेको छु ।
पत्रकारिताबाट राजनीतिमा आउँदै गर्दा कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुभएको छ ?
प्रतिक्रिया उत्साहजनक छ । खास गरी जिल्लामा जुन खालको रेस्पोन्स पाएको थिए, त्यहीँ खालको रेस्पोन्स महाधिवेशन प्रतिनिधि हुँदै गर्दा अग्रज साथीबाट पाएँ । उत्साह र प्रेरित गर्नुभयो । शुभकामना पाइरहेको छु । त्यसले पनि महाधिवेशनमा अगाडि बढ्न थप हौसला प्रदान गरिरहेको छ । मिडिया र अग्रज साथीहरूले पनि हौसला दिइरहनुभएको छ । यसले राजनीतिक यात्रा गर्न कहीँ न कहीँ थप प्रेरित गरेको छ ।
दोलखाबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनुभयो, अब महाधिवेशनमा कुन पदमा दाबी हो ?
१४औँ महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्य पदमा उम्मेदवारी दिने निधो गरेको छु । खुल्ला वा समावेशीलगायत समूहगत रूपमा भने उम्मेदवारी दिने बेला तय गर्नेछु । अहिले मैले आफूलाई केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवारका रूपमा उभ्याएको छु ।
राजनीतिमा होमिएर उम्मेदवारी दिँदै गर्दा तपाईँको मूल एजेन्डा के हो ?
हाम्रो सन्दर्भमा राजनीतिक नेतृत्व र दलले पटकपटक राजनीतिक परिवर्तनको नेतृत्व गरे । सहभागी भएर भूमिका निर्वाह गरे । तर त्यसबाहेक आर्थिक समृद्धिको विषयमा हाम्रो प्राथमिकताको सूचीमा तल परेको हो कि भन्ने देखिएको छ । यो अवस्थामा आम नेपालीको प्राथमिकता समृद्धि हुनुपर्छ । देश समृद्ध भयो भने नागरिक पनि समृद्ध हुन्छन् । समृद्धिसँग देशको इज्जत पनि जोडिएर आउँछ । त्यो इज्जत सम्मान दिलाउने सन्दर्भमा देशभित्र र बाहिर हेर्नुपर्छ । हाम्रो नागरिकलाई खाडी मुलुकमा हेर्ने जुन दृष्टिकोण छ, समृद्ध देशका नागरिकले पाउने दृष्टिकोणभन्दा फरक छ । यो कुरा हाम्रो समृद्धिसँग जोडिन्छ ।
त्यसकारण सम्मान र समृद्धिलाई सँगसँगै जोडेर लैजाने र सम्मानित नेपाली, सम्मानित देशको नागरिक हुने अवस्था आउनुपर्छ । त्यसकारण अब हाम्रो प्राथमिकता राजनीति सँगसँगै समृद्धि हुनुपर्छ । आर्थिक विकास हुनुपर्छ । यो कुरा एउटा व्यक्ति वा पार्टीले उठाउने नारा होइन, देशको, नागरिकको नारा हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई सफल बनाउन हरेक दलका नेता कार्यकर्ताको प्राथमिकता हुनुपर्छ । यो एजेन्डा त्यो हिसाबले उठान गर्दै गर्दा मेरो मात्र होइन यो देशकै एजेण्डाको एउटा अंश मैले उठान गरेर अघि बढ्ने प्रयास गरेको छु ।
काँग्रेसमा उम्मेदवारी दिँदै गर्दा गुटगत आधारमा दिने अभ्यास छ । तपाईँको उम्मेदवारी कुन समूहबाट ?
उम्मेदवारी दिने सन्दर्भमा चुनावका बेला गुट बन्ने, उम्मेदवारी दिने कुरा अस्वाभाविक होइन । स्वाभाविक ढङ्गले लिइन्छ । यसरी हेर्दा मैले पनि कुनै गुटसँग जोडिएर उम्मेदवारी दिनुपर्ने अवस्था २४ गतेसम्म मनोनयनको समयसम्म हुनसक्छ । तर आजको दिनमा म जुन जिल्ला (दोलखा)बाट प्रतिनिधित्व गरेर आए, महाधिवेशन प्रतिनिधि भएर आउँदै गर्दा मैले के बुझ्छु भने म सबैको हुँ । किनभने म जुन पेसाबाट आएको छु त्यहाँभित्र मैले तटस्थता मेन्टेन गर्नुपर्ने थियो ।
त्यो तटस्थता मेन्टेन गर्दा कतिपय अवस्थामा आरोपित हुने अवस्था पनि आयो होला अर्को पक्षबाट । तर आज त्यहीँ दलभित्र फेरि अर्को समूहबाट आरोपित हुनेभन्दा पनि सकेसम्म सबैको सहमतिले सबैको हुने गरी जाने प्रयास गर्नेछु । यद्यपि त्यो अवस्था भएन भने पनि अन्तिम समयसम्म कुनै न कुनै एउटा रहनुपर्ने अवस्था आउँछ । त्यसका लागि म छलफलमा छु । उम्मेदवारी मनोनयन पछि यसका बारेमा प्रस्ट हुन्छ ।
तपाईँ पत्रकारिताबाट राजनीतिमा आउनुभएको छ, तपाईँको पत्रकारिता यात्राबारे थोरै बताइदिनुस् न ।
मैले २०५७ सालमा रेडियो नेपालको घटना र विचारबाट सुरु गरेको थिए । एक वर्षपछि इमेज मेट्रो टेलिभिजनमा सुरु गरे । केही समयमा इमेज च्यानलमा रूपान्तरण भयो । २०६/र०६३ को आन्दोलनपछिसम्म त्यहाँ काम गरे । त्यसपछि एकवर्ण जति नेपाल वानमा पनि काम गरे । बिरामी अवस्थामा एक वर्ष ब्याक भए । उपचार पछि फर्किँदा रेडियो न्युज, नेपाल टेलिभिजनमा सूचना प्रविधिसम्बन्धी कार्यक्रम इन्टर सुरु गर्‍यौँ । त्यहाँ आफै उत्पादन गरेर प्रसारण गर्थ्यौँ ।
त्यहीँ बेला कान्ति सिटी कलेजमा आमसञ्चार पढ्दै गरेका केही साथी मिलेर एउटा कम्पनी खोल्यौँ । त्यहीँ कम्पनीले हाम्रा कुरा अनलाइन पत्रिका सुरुवात गर्‍यो । त्यहीँ हाम्रा कुरामा यो उम्मेदवारी घोषणा गर्नुअघिसम्म कार्यरत थिए । उम्मेदवारी घोषणापछि सम्पादकीय नेतृत्वबाट बिदा लिएको छु । संस्थापक सम्पादकको हैसियत मेरो नाम रहिरहनेछ । सञ्चालकको भूमिका भने रहिरहनेछ । ०५७ सालअघि मैले केही वर्ष साप्ताहिक पत्रिकामा पनि काम गरे ।
पत्रकारितामा रहँदा सत्ता हल्लाउनुभयो । सभामुख कृष्ण महरा र सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको काण्ड बाहिर ल्याएर पदमुक्त हुने अवस्था आयो । पत्रकारितामा सफलजस्तो देखिएको तपाईँको करियर राजनीतिमा कस्तो रहला ? सफल भइन्छ भन्ने आत्मविश्वास कत्तिको छ ?
त्यो हेर्दै जाउँ । किनभने हामी काम गर्दै जाँदा अहिले नै धेरै महत्त्वाकाङ्क्षा राख्ने कुरा त्यति उपयुक्त हुँदैन । तर म जुन ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छु, प्रयास गरिरहेको छु, त्यसमा साथ सहयोग मिल्दै गयो भने सफल हुन सकिएला । नभए पनि ठिकै छ । सिक्दै अगाडि बढ्ने कुरामा विश्वास गर्छु ।
अहिले पत्रकारिता राजनीतिमा आउने माध्यम बनेको देखिन्छ ।
तपाईँ आफैँ पनि प्रेस युनियन महासचिव हुँदै पार्टी राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभएको छ । बाहिर यसलाई नकारात्मक रूपमा टिप्पणी गर्ने गरिन्छ । तपाईँले यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
कुनै एउटा पेसा, व्यवसाय, सङ्गठनमा काम गर्दै गर्दा, सङ्गठनबाट आफ्नो नेटवर्क विस्तार गर्दै गर्दा अर्को ठाउँमा जाने कुरालाई अन्यथा मान्नु हुँदैन । खेलकुदबाट राजनीतिमा आएका छन् । कला क्षेत्रमा काम गरेका मान्छे राजनीतिमा आएका छन् ।
शिक्षा, उद्योग व्यवसायमा गर्ने मान्छे पनि आएका छन् । सबै पेसा व्यवसायका मान्छे एउटा समाजसेवाका रूपमा, अर्को सेवा गर्ने, अर्को प्ल्याटफर्मको रूपमा आउने कुरालाई मैले अन्यथा मानेको छैन । हामी कुन नियतले प्रवेश गरेका छौँ भन्ने मुख्य कुरा हो । यसमा नियत सफा राखेर थप योगदान गर्न सक्छौँ भन्ने उद्देश्य राखेर आउँदै त्यसलाई मैले अन्यथा मानेको छैन ।
अहिले हरेक पार्टीमा नेतृत्वमा युवा पुस्ता आउनुपर्छ भन्ने बहस छ । काँग्रेसमा पनि आवाज सुनिन्छ । युवाको हिसाबले उम्मेदवारी दिँदै गर्दा कतिको सहजता महसुस गर्नुभएको छ ?
पार्टीमा सक्रिय सदस्यताको वितरणदेखि नै युवाको उपस्थिति बढेको छ । त्यसको रिफ्लेक्सन क्षेत्रीय प्रतिनिधि हुँदै महाधिवेशन प्रतिनिधिसम्म आइपुगेको छ । पहिलोपटक अथवा नयाँ महाधिवेशन प्रतिनिधिको सङ्ख्या ६० प्रतिशत बढी छ । यसले केन्द्रीय समितिमा पनि रिफ्लेक्सन देखिन्छ भन्ने लाग्छ । पुस्तान्तरणको विषय सक्रिय सदस्यता बिस्तारले नै स्थापित भइसकेको छ । त्यसैले पुस्तान्तरणका लागि यो एउटा उपयुक्त समय पनि हो । पाकाको नेतृत्वमा युवाको उपस्थिति बढ्ने अवस्था यो पटक देखिन्छ ।
अन्तिममा महाधिवेशनमा होमिएका नेता कार्यकर्ता, महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ ?
हामी यस्तो समयमा आएका छौँ कि राजनीतिक परिवर्तनको नेतृत्व गरेको पार्टी आर्थिक समृद्धिको एजेन्डा सँगसँगै लानुपर्ने अवस्थामा छ ।
यो देश समृद्ध, समुन्नत बनाउन, नेपाली नागरिक सम्मानित बनाउनका लागि काँग्रेसका प्रत्येक नेता कार्यकर्ताको ठूलो योगदान र भूमिका आवश्यक छ । सबै नेता कार्यकर्ता महाधिवेशनमा आउँदै गर्दा यी विषयमा जोडदार उठाएर एउटा बलियो काँग्रेस बनाउने दृढ सङ्कल्प यहाँबाट लिएर जानुहुनेछ ।
किनकि आउने काँग्रेसले फेस गर्नुपर्ने जति पनि चुनावहरूमा एउटा ठूलो दलको रूपमा स्थापित सकोस् । ठूलो दल मात्र होइन एउटा बहुमत प्राप्त दल स्थानीयदेखि प्रदेश हुँदै केन्द्रमा एउटा सरकार बनाउन सक्ने हैसियत राख्न सकोस् । त्यसमा हामी सबैको मेहनत जरुरी छ । त्यो मेहनत सम्भव पनि छ । यहीँ आग्रह गर्छु । यसका लागि हामी सबै हातेमालो गर्दै अगाडि बढौँ ।
लामटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज दुर्लभ वन्यजन्तुको वासस्थान हो : प्रमुख संरक्षण अधिकृत भट्टराई
बिहानदेखि साँझसम्म सेवा प्रवाह गरेको छु : सिडिओ नवराज जैसी
‘अहिले कम्युनिस्ट मुभमेन्टको विवादरहित नेता ओलीजी नै हो, उहाँ दोहोरिए राम्रो हुन्छ’ : महन्थ ठाकुर
एमालेमा गुटबन्दी सकियो, महाधिवेशनले साझा नेता छान्छ : पद्‌मा अर्याल
चितवन माओवादीको प्रभाव क्षेत्र हो भन्नु भ्रम मात्र हो : प्रदीप ज्ञवाली
महासचिवभन्दा तल्लो पदमा उठ्ने कुरै भएन : सुरेन्द्र पाण्डे
‘मुस्ताङको तापक्रम अत्यधिक बढेको छ, हिमपहिरो घटना दोहोरिन सक्छ’
चाडबाडलाई लक्षित गरी सुरक्षा व्यवस्था मिलाएको छु : प्रजिअ जैसी
पहिचानको समस्यामा छ भारतीय तामाङ- अध्यक्ष मोक्तान
भाषा आयोगको सिफारिसले नेपालको एक भाषिक नीतिलाई ब्रेक गर्नेछ- भाषाशास्त्री योन्जन
जैविक विविधताको संरक्षण अरूले लादेर र करले हुँदैन : प्रमुख संरक्षण अधिकृत राना
तामाङ चिकित्सक उत्पादन र सामुदायिक अस्पताल सञ्चालन तामाङ चिकित्सक समाजको दीर्घकालीन योजना हो– डा. दिलबहादुर थोकर
१. मलेसिया भ्रमणमा रोक
२. नेता पुन सोमबार नेपाल फर्किने, अब माओवादी पदाधिकारीको टुंगो लाग्ने
३. दैनिक १४ देखि १८ घण्टा लोडसेडिङको मारमा व्यवसायी
४. आमा र शिशुको मृत्यु, परिवारले शव उठाउन मानेन
५. हिउँमा खेल्दै पाथीभराको दर्शन, तीर्थयात्रीको आवतजावत बढ्यो
६. तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्न माओवादीले वातावरण बनाउने